You Nwee Ntọala na Webmasters? | Martech Zone
Fraịde, Septemba 24, 2010 Monday, October 20, 2014 Douglas Karr
Izu a, m na-enyocha saịtị ndị ahịa na-eji webmasters ngwaọrụ. Otu n'ime ihe ọjọọ ndị ọ chọpụtara bụ na ọtụtụ n'ime njikọ dị na saịtị ahụ nwere akara mkpọsa na ha. Nke a dị mma maka onye ahịa ahụ, ha nwere ike soro onye ọ bụla na-akpọ-to-action (CTA) na saịtị ahụ niile. Ọ bụghị nnukwu ihe maka njikarịcha Ngini Nchọgharị.
Nsogbu bụ na Google (engine engine) amaghị ihe koodu mkpọsa bụ. Ọ na-achọpụta otu adreesị gị na saịtị gị dị ka URL dị iche iche. Yabụ ọ bụrụ na m nwere CTA na saịtị m na m gbanwere oge niile iji nwalee ma hụ nke na-adọta mgbanwe ndị ọzọ, enwere m ike ịkwụsị:
Nke ahụ bụ n'ezie otu ibe, mana Google na-ahụ URL atọ dị iche iche. Njikọ nke ụlọ gị dị mkpa n'ihi na ọ na-agwa injin nchọ ihe ọdịnaya dị mkpa n'ime saịtị gị. Dịka, ibe obibi gị na ọdịnaya 1 jikọtara na peeji nke ụlọ gị dị oke arọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ koodu mkpọsa ejirila oge niile, Google na-ahụ njikọ dị iche iche yana, ikekwe, ọ bụghị ịtụle nke ọ bụla dị ka o kwesiri.
Nke a nwere ike ime na njikọ inbound sitere na saịtị ndị ọzọ. Ebe ndị dị ka Feedburner na-agbakwunye koodu mkpọsa Google Analytics na njikọ gị na akpaghị aka. Applicationsfọdụ ngwa Twitter na-agbakwunye koodu mkpọsa (dị ka TwitterFeed mgbe agbanyere). Google na-enye a di na nwunye nke ngwọta na nke a.
Otu ụzọ bụ nbanye gị Njikwa Nchọta Google akaụntụ na mata oke enwere ike iji ya dị ka koodu mkpọsa. N'ihi na Google Analytics, ọ melite dị ka ndị a:
Peeji ahụ ga-agwa gị ihe ọnụọgụ nke ọ na-ahụ na saịtị gị, yabụ ọ dị mfe ịchọpụta ma nke a ọ na-emetụta gị. Google kwuru, sị:
Dynamic parameters (dịka ọmụmaatụ, NJ oge, isi mmalite, ma ọ bụ asụsụ) na URL gị nwere ike ime ka ọtụtụ URL dị iche iche na-arụtụ aka na otu ọdịnaya. Ọmụmaatụ, http://www.example.com/dresses'sid=12395923 nwere ike rụtụ aka n'otu ọdịnaya dị ka http://www.example.com/dresses. Can nwere ike ịkọwapụta ma ịchọrọ Google ileghara ihe ruru 15 kpọmkwem ederede anya na URL gị. Nke a nwere ike ime ka craw na-arụ ọrụ nke ọma na obere oyiri URL, ma na-enyere aka iji hụ na echekwara ozi ịchọrọ. (Mara: Ọ bụ ezie na Google na-atụnye aro n'uche, anyị anaghị ekwe nkwa na anyị ga-eso ha n'ọnọdụ ọ bụla.)
Ihe ngwọta ọzọ bụ iji hụ Njikọ Canonical edoziri. Maka ọtụtụ usoro njikwa ọdịnaya, nke a bụ ndabara ugbu a. Ọ bụrụ n’inweghị usoro njikọ canonical dị na saịtị gị, kpọtụrụ onye na-eweta CMS ma ọ bụ webmaster gị iji chọpụta ihe kpatara ya. Nke a bụ obere vidiyo na njikọ Canonical, nke ndị isi nyocha niile nabatara ugbu a.
Gbalia ihu na-eme abuo - i nweghi ike ilezi anya, ihe ozo agaghi emebi gi!
Tags: ndị webmasters googlegoogle +search engine njikarịchaAwebmaster